Unyanyiswe abezindaba u-Igesund | IOL Isolezwe
Unyanyiswe abezindaba u-Igesund
Isolezwe / 12 July 2012, 11:09am /
UMQEQESHI weBafana Bafana uGordon Igesund ucasulwe ngabezindaba ngokuqagela ithimba lakhe labaqeqeshi ekubeni ebengakalimemezeli esizweni njengoba ekhala ngokuthi lokhu kuzoshiya isithombe esimbi kwabebe-phakanyiswa ababhali.
U-Igesund umangaze iningi ngoLwesibili ntambama ememezela uThomas Madigage noSerame Letsoaka njengamaphini akhe njengoba u-Alex Hederia ethathe isikhundla sokucija onozinti.
Kwabezindaba bese kuphakanyiswe amagama amaningi okubalwa kuwona uNeil Tovey obecija iThanda Royal Zulu, Fani Madida waMaZulu, Doctor Khumalo weKaizer Chiefs, Lucas Radebe oyinkakha yeBafana no-Andre Arendse owayevimba kuBafana.
U-Igesund uthe udumele ngobekushiwo ngabezindaba.
“Okwenziwe ngabezindaba beqagela ithimba engizosebenza nalo akuzange kubenze ubulungiswa emagameni abephakanyiswa. Mina angikaze ngithi ngizoqoka abadlali baka-1996 ngoba bengibazi abantu engifuna ukusebenza nabo,” kusho u-Igesund.
“Abebephakanyiswa ngabezindaba ngiyabahlonipha kodwa engibaqokile ngiyakholwa wukuthi bazosiza isizwe siye phambili okuyinto edingwa yiBafana. Akukho engingakwenza ukuvimba abantu ukuba bapha-kamise amagama abantu ababathandayo.”
U-Igesund uzovivinywa ngumdlalo weBafana neBrazil eSao Paulo ngoSepthemba 7. Ngemuva kwalo mdlalo uzobhekana nePoland kowobungani aphinde abhekane neZambia koweNelson Mandela Challenge ngoNovemba 17.
“Ngiqoke uMadigage njengephini ngoba amagalelo akhe mahle. Njengamanje uphumelele kunawo wonke amaphini asiza ku-Absa Premiership. Usebenze noPitso Mosimane obecija iBafana esekuSuperSport United. Abadlali abaningi abadlala kuBafana okubalwa oTeko (Modise), Morgan Gould, Gaxa (Siboniso) noMphela (Katlego) badlule esandleni sakhe,” kusho u-Igesund.
“USerame usesebenze kuSafa isikhathi eside. Uzongisiza ngezinto eziningi ikakhulukazi ezithinta ukuthuthukiswa kwamakhono abafana abasebancane.” Ngonyaka ozayo elakuleli yilona elizosingatha i-Africa Cup of Nations kanti u-Igesund ubekelwe umbandela wokufinyelela emidlalweni eyandulela amanqamu.
“U-Alex ngisebenze naye kuSundowns nakuPirates sinqoba izicoco zeligi. Uyakwazi ukugcina onozinti benokuzethemba. Uneziqu kwezokuqeqesha onozinti njengoba eyi-Fifa Goalkeeper coach Instructor,” kusho u-Igesund.
IBafana izodlalela imidlalo ka-Group A, eThekwini kanti uma iqeda iphezulu eqoqweni layo izodlala nowe-quarter final kwelikaBhanana.
“Ngijabule ngokuthi siza eThekwini ngoba yisekhaya. Nganqobela khona isicoco sami sokuqala seligi neRangers (ehleka). Njengoba wazi ukuthi eGoli ayikho imidlalo ezodlalelwa khona ngaphandle kowamanqamu nowokuvula, sibone iTheku kuyiyona ndawo engcono ngoba nabantu baphuma ngezinkani uma iBafana idlala khona,” kusho u-Igesund.
Mayelana noMoeneeb Josephs uthe: “Ngizohlala naye phansi sikhulume ngoba ungumdlali obaluleke kakhulu eqenjini lesizwe. Kubalulekile ukuthi sibe nonozinti abaphambili eqenjini lesizwe njengeSpain esino-Iker Cassillas noVictor Valdes.”